Gurraachi Lammii Ameerikaa dhaddacha irratti nama obboleessa isaa ajjeese dhiifama gaafate – Fana Broadcasting Corporate
Gurraachi Lammii Ameerikaa dhaddacha irratti nama obboleessa isaa ajjeese dhiifama gaafate
Finfinnee, Fulbaana 26, 2012 (FBC) – Gurraachi Lammiin Ameerikaa dhaddacha irratti nama obboleessa isaa ajjeese dhiifama gaafate baayyota ajaa’ibsiise.
Tibbana ta’iin mana murtii Ameerikaa keessatti raawwate dhiifama waliif gochuu fi waliin jiraachu dhala namaa caalumaatti kan cimsudha.
Dhimmichis akka ture, adiin lammii Ameerikaa taate Ambar Guygar jedhamtu ofiisseeri poolisii gurracha lammii Ameerikaa nama umuri 26 Boothaam jedhamu waggaa tokko dura dogoggooraan itti dhukaasuun kan ajjeefte.
Badii raawwate kanaan to’annaa poolisii jala kan oolfamte ofiiserri poolisii kun dargaggeessa kana badii tokko malee shakkii qofaa itti dhukaasuun akka ajeefte amante.
Qorataan poolisii gurrachi lammii Ameerikaa kun badii tokko malee ofiisera poolisii kanaan du’uu isaa raga quubsaan mirkaneesseera.
Abbootiin murti bu’uuruma ragaan isaaniif dhiyaateen shakkamtuu kana irratti murii dabarsuuf dhaddacha irra jiru.
Yeroo kana egaa obboleessi nama du’ee Biraandit kan jedhamu abbootii murtii dabalatee gochi hirmaattoota dhaddachaa boochise kan raawwatame.
Biraandit miira keessa galuun abbaa murtii erga eyyamsiise boodde murteen kan ishii eeggatu nama obboleessa isaa ajjeeseen akkas jedhe “ obboleessa kiyya heedduun jaaladha ture, du’a obboleessa kiyyaan walqabatee abbaan kiyya gadda isaa irraan kan ka’e hedduu miidhameera. Haatu’uti waanti ta’e hundumtuu dogoggooraan raawwatame, ati hidhamuun obboleessa kiyya naaf hin galchu, maatii isaatiif wanti bu’u hin jiru, dhugumaa dogoggora hojjetetti amantee kan itti ceephooftu yoo ta’e dhiifama si godheera” jechuun itti marmee haammatte dhungate.
Gochi obbooleessi nama du’ee raawwate kun abbootii murtii dabalatee hirmaattoota dhaddachaa kan boochise ta’uu BBC gabaaseera.
Lammiin Afrikaa Kibbaa bareedduu addunyaa bara Faranjootaa 2019 taate
Daa’ima waggaa kudhanii hojii qonnaan jiraatu
Arsii Nageelleetti adurreen yaala baqaqsanii wal’aanuun dhalte
Bilbilli Andro’idi abbaan iskirinii lamaa gabaarra ooluuf
Dooktar Abiyyi Ahimad Ayyaana Sabaaf sablammootaa ummattoota…
Komishiniin Poolisii magaalaa Finfinnee qophii taasisu…
Ugaandaatti balaa lolaan lubbuun namoota 12 darbe
Yaadni Maaster plaaniin haaraan hojiitti hiikkamuuf jedhu…